Enwekwu ihe ọkụkụ CO2 ga-eme ka udu mmiri na North America | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị bi n'ime ụwa ebe, ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe ịtụnanya, ihe na-eme ebe a nwere ike inwe mmetụta n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa. Ka ihu igwe dị, anyị ekwuola okwu na a ederede na nnukwu mmiri nke mmiri ozuzo na-emepụta na-achịkwa okpomọkụ gburugburu ụwa.
Ugbu a, nnyocha e bipụtara na akwụkwọ akụkọ Nature Climate Change achọpụtala, site na ịga n'ihu na-ebunye carbon dioxide n'ime ikuku, udu mmiri North America nwere ike ịda mbà. Ọ bụrụ na ọ mee, nsonaazụ ya nwere ike ịdị egwu.
1 Gịnị bụ udu mmiri?
3 Kedu ihe kpatara oke udu mmiri North America nwere ike ịda mba?
Gịnị bụ udu mmiri?
Iji ghọta mkpa okwu a dị, anyị ga-akọwa ihe bụ ụtụtụ. A udu mmiri bụ a n'oge a kara aka nke na-emepụta site na nchighari nke ebe okpomọkụ mmiri ozuzo, nke oscillates si n'ebe ugwu nke Tropic nke Cancer na ndịda nke Tropic nke Capricorn na afọ nke afọ. Eriri a na-eburu mmiri ozuzo na ndịda ọdịda anyanwụ site na Ọktoba ruo Machị, ma site na Eprel ruo Septemba na mgbago ugwu.
Ọ bụ ezie na n'otu akụkụ, mmiri ozuzo na-ezo, na-ebute oke idei mmiri, na nke ọzọ, na ntụle, oge ọkọchị na-enweta.
Ihe kpatara ya bụ na ụwa dị jụụ ma kpoo ọkụ karịa mmiri. E nwere udu mmiri nke udu mmiri, na udu mmiri nke udu mmiri. A na-emepụta nke mbụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ụwa ruru okpomọkụ dị elu karịa nke oké osimiri, nke mere na ikuku na-ebili na mbara ikuku na-akpata oke ikuku ma ọ bụ mpaghara nke obere nsogbu. Ifufe na-efe site na mpaghara nke nnukwu nrụgide na mpaghara nke nrụgide dị ala iji gbalịa ịhazigharị nrụgide abụọ ahụ, si otú a na-emepụta ifufe siri ike nke na-agbapụta n'oké osimiri. N'ikpeazụ, mmiri ozuzo na-ada n'ihi elu na jụrụ ikuku nke ugwu.
N'oge udu mmiri na udu mmiri, ala na-ajụ ngwa ngwa karịa, mana oke osimiri na-ewe ogologo oge iji mee nke a, yabụ ọnọdụ okpomọkụ na-adị elu. Ya mere, ikuku na ebili na-ebute mpaghara nke obere nsogbu n’oké osimiri, ikuku na-efe site na ala n’ime oke osimiri. Dika odi iche na okpomoku di na nke ozo pere mpe karie oge ekpomoku, ikuku nke na efeputa site na anticyclone rue oke mmiri ozuzo adighi adi otua.
Kedu ihe kpatara oke udu mmiri North America nwere ike ịda mba?
Sobọchị Monsoons na-emetuta ikuku gas, dị ka ndị ọkà mmụta sayensị ọmụmụ Salvatore Pascale, William R. Boos na ndị otu ha. N'iji usoro ihu igwe zuru ụwa ọnụ, ha achọpụtala nke ahụ Ọ bụrụ na anwụrụ ọkụ carbon dioxide ga-agba okpukpu abụọ, udu mmiri nke North America ga-ebelata, kpọmkwem na ndịda ọdịda anyanwụ United States. N'ihi gịnị?
Ọnọdụ ikuku na, ya mere, mgbagha na-esighị ike nke edo edo na-ekpo ọkụ nke oke osimiri dịka ihe kpatara mbelata mmiri ozuzo.
Ka ọ were, a ga-ewere usoro mmegharị ma, karịa ihe niile, jiri akụ mmiri mee ihe nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ba ụba ikuku CO2 ga-eme ka udu mmiri North America daa mbà